A video na-egosi modul nke smart watch BLOCKS | Gam akporosis
BLOCKs modular smartwatch na-egosi modulu ya na-agbanwe agbanwe na vidiyo
Nyere ọhụụ na-adịbeghị anya na ihe metụtara modular na anyị hụrụ na LG G5, ebe a ị nwere ike ịgafe nyocha anyị mere n'izu gara aga, na ihe Lenovo chepụtara maka Moto Z ọhụrụ abụọ ahụ, anyị ga-aga n'ihu ịnwe atụmatụ na echiche nke ndị nrụpụta ndị ọzọ na-ahụ akụkụ a dị ka ụzọ ha nwere ike isi na-adọta ọtụtụ ọnụọgụ ndị ọrụ na-achọ ụdị ọzọ ngwaọrụ.
Ngọngọ bụ a modular smartwatch, nke anyi kwurula banyere ya n’oge ahu, na nke na-adabere na ihuenyo, batrị na mgbawa nwere ike ịbụ tinye mmezi oru Site na modulu agbakwunye na ahụ nke elekere n'ụzọ dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma. Ihe a na-eyi akwa nke na-ewe ọtụtụ echiche ya site na Project Ara yana na anyị nwere ike ịhụ na vidiyo nke gosipụtara akụkụ nke agwa ya ka ha wee gbalịa ime ka ọtụtụ ndị ọrụ jupụta ụwa niile.
NKWA nwere nnukwu Kickstarter mkpọsa nke gwụchara na njedebe nke 2015 na na ekele nkekọrịta video anyị nwere ike ịmaraworị na echiche ahụ na-arụ ọrụ zuru oke. A na-egosi modulu dị iche iche na ịdị mfe nke ijikọ ha na akụkụ bụ isi nke wearable. Otu n'ime isi ihe dị mma nke smartwatch a bụ na ọ nweelarị Qualcomm Snapdragon 2100 mgbawa kachasị ọhụrụ, nke emere maka ụdị ejiji a.
Ekwesiri ikwuputa na ngọngọ agbadoghi na gam akporo Wear, mana ha nwere ụdị mgbanwe nke ihe mepere emepe Gam akporo. N'ime modulu ndị pụtara na vidiyo ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ batrị agbakwunyere, ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ nyocha nke obi, modul sensọ na nrụgide barometric na ọnọdụ okpomọkụ na ụdị nkịtị nkịtị na nche na eriri. Ejiri ígwè mee isi ahụ, mana modul ndị ahụ bụ plastik.
Ọchịchọ ọzọ nke vidiyo ahụ bụ na ọ naghị egosi etu modulu ejikọrọ si arụ ọrụ, ya mere, ọ ka mma ichere ntakịrị ka BLOCKS a na-eyi uwe rutere n'ahịa. Ugbu a ọ bụ idobere ka a ego nke $ 330 na modulu anọ gụnyere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » BLOCKs modular smartwatch na-egosi modulu ya na-agbanwe agbanwe na vidiyo
Samsung nwalere interface ọhụrụ maka TouchWiz na "Galaxy Beta Mmemme"
Lolọ nchekwa Fallout ga-enweta ozi, ihe odide ọhụrụ na PC mbipụta na July